Mukuru weZimbabwe Exiles Forum uye vari murwiri wekodzero dzevanhu Advocate Gabriel Shumba vanonzi vakaitwa kafira mberi nemurume asina kuzivikanwa uyo akavapindira mumba mavo iri mukati meguta reJohannesburg muSouth Africa mangwanani emusi weMugovera.
Vataura vakamirira sangano reZimbabwe Exiles Forum uye vachiona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamhembe kweAfrica, VaTinomuvonga Mambeu vanoti nanhasi vachiri kushaya kuziva kuti murume akarwisa Advocate Shumba uyu akapinda sei padzimba dzavanogara sezvo pachichengetedzwa zvemhando yepamusorosoro.
Asi vanoti kunyange hazvo nyaya ichiri mumaoko emapurisa, vanofunga kuti kurwiswa uku kune chekuita nezvematongerwo enyika kuburikidza nebasa rinoitwa naAdvocate Shumba rekurwira kodzero dzevana veZimbabwe.
VaMambeu vanoti murume uyu akarwisa Advocate Shumba panguva imwecheteyo achiedza kuvabaya nebanga, asi vakazokwanisa kuita kuti adonhendze banga iri izvo zvakazoita kuti avarwise nemidziyo yaive yakashongedzeswa mumba mavo.
Vanoti Advocate Shumba vakakuvadzwa zvakaipa mumusoro uye vari kupera simba, kunyange hazvo vakaburitswa kuchipatara kuti vapone vari kumba.
Hurukuro naVaTinomuvonga Mambeu